अब बाँच्दिनन् भनेर अन्तिम पुजापाठ समेत गरेकी अनिता खड्का बोल्न थालिन्, पैसाको लागि नाटक गरे भन्नेलाई परिवारले दियो यस्तो जवाफ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 5, 2021 AdminLeaveaComment on अब बाँच्दिनन् भनेर अन्तिम पुजापाठ समेत गरेकी अनिता खड्का बोल्न थालिन्, पैसाको लागि नाटक गरे भन्नेलाई परिवारले दियो यस्तो जवाफ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौ । विनोद खड्काको घरमा अहिले खुसीयाली छाएको छ । लामो समय देखि अस्वस्थ्य भएकी अनिता अहिले बोल्न थालेपछि विनोद खुसी भएका हुन् । धेरै वर्ष काठमाडौको वीर अस्पतालमा उपचार गराइएकी अनितालाई अहिले घर लगिएको छ । उनको घाँटीको श’ल्यकृ’ या गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताएका छन् ।
उनलाई उपचारमा सहयोग गर्न भन्दै देश विदेशवाट निकै सहयोग आयो । लामो समय सम्म उपचार गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो रकमको आवश्यकता पर्ने भएकाले सहयोग उठाइएको थियो । अचानक दुई वर्ष अघिको जेठ २९ गते उनले टाउको दु’ख्यो भनेपछि विनोदले अस्पताल लिएर गए । डाक्टरले अनितालाई ब्रेन ह्याम्रेज भएको बतायो ।
परिवारले आश पनि छोडेका थिए । अनिताको बैतर्नी पनि गरेको र गाइदान समेत गरेको परिवारका सदस्यहरुले बताएका छन् । उनलाई अब फर्काउन सकिदैन भन्दै गाइ दान गरेपछि एक पटक अस्पताल लैजाउँ न त भनेर लिएर गए । तर अस्पतालमा चिकित्सकले अनिताको बाँच्ने चान्स २० प्रतिशत मात्र भएको बताए ।
अनि विनोदले भने मेरो सबै सम्पत्ती सकिएपनि मेरो अनितालाई बचाइदिनु भनेर आग्रह गरे । त्यस पछि उनको उपचार सुरु भएको थियो । अहिले सबैको सहयोग, डाक्टरको प्रयास र श्रीमानको विश्वासले अनिताको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ । अहिले पनि उनलाई परिवारको सहयोग चाहिन्छ । घाँटीको श’ल्य’कृ’या गर्नका लागि उनको चेतनामा परिवर्तन भएपछि मात्र सम्भव हुने भनेपछि उनीहरुले अनितालाई घर लिएर आए ।
अहिले भने अनिताको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ । थप हेर्नुहोस् भिडियोमाः